Fampidirana | Weifang Sofiq Machinery Co., Ltd.
Ny orinasan-tsika dia ampy fitaovana ary manana hery ara-teknika manara-penitra, midika ho fomba fikarohana akaiky. Nandritra ny am-polotaona maro, dia manangona harena an-tsokosoko amin'ny traikefa avo lenta izahay. Amin'ny alàlan'ny famolavolana vokatra matihanina sy famolavolana endrika dia manome vahaolana namboarina ho an'ny mpanjifa izahay.
Ny orinasa dia mitazona hatrany ny soatoavina fototra amin'ny "famoronana lanja ho an'ny mpanjifa", ary manaraka ny fitsipiky ny fahitsiana sy ny tombotsoan'ny tsirairay hahazoana tranga mandresy. Miaraka amin'ny fanavaozana mitohy, izahay dia manolo-tena amin'ny fanomezana ny vokatra tonga lafatra sy ny serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa.
Masinina bobongolo, Sandbox, Milina Punch Out, Famolavolana koveta fanariana, Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Famolavolana tavoahangy,